Mai Chibwe VekwaZimuto: Kusimbisa masuru
Toda kumbotaura nyaya iyi nokuti inonetsa vakawanda.
Vakadzi vakawanda vanoshandisa mitowo yakasiyanasiyana pakusimbisa masuro dzavo. Imwe yemitowo iyi mabhora awa anonzi Ben Wa balls. Anotengwa ari maviri akabatanidzwa nekatambho pakati kakareba ma sendimita anosvika mashanu. Pozoitawo chimwe chitambho chinobva pane rimwe bhora chakareba masendimita anosvika kuda gumi. Mukadzi anotonona kuti chitubu chivhurike opakira mabhora aya ari maviri muchitubu tambho iya refu yosara pazhe. Osimuka zvake achifambafamba mabhora arimo. Anofanira kukwanisa kufamba namabhora awa asingabudi nokuti anenge achisunga masuro. Kusunga kwaanoita kuya kunosimbisa masuro yake. Kusvika okwanisa kuti kana chigumwe chomurume chaicho paya pamunenga muchitamba zvenyu iye achipinza chigumwe achitsvaka inonzi G iya mukadzi anokwanisa kusunga masuro kubata chigumwe chomurume, kuchisvina zvokuti anotohwa kuti asvinwa.
Zvino chombo kana murume asina kuchekwa, unofunyungura ganda kuti chimusoro chiite pabani, iro ganda racho rava mumativi, wopinza chombo muchitubu. Nokukura kwachakaita hazvinetsi kuchisunga sunga nemasuro.
Tiriki iripo ndeyokugona kuti uku chiuno chiri pabasa, uku masuro iri pabasa. Kana ukahwa oda kukasirisa mudzikise sipidhi nemasuro. Ukaona ava kukuchemedza zvawandisa zvokunakigwa, chimuita sipidhi iwe agokudiridzira. Paanokudiridzira ipapo svina chombo nemasuro yako unohwa aridza mhere chaiyo.
Ini kusimbisa masuro handina kumboshandisa mabhora. Ndinoshandisa zvokumisa weti patoiret. Chororororo kwiiiiiiiii, Chororororo kwiiiiiiiii, Chororororo kwiiiiiiiii, etc. Kana wamboti kwiii paya verenga kuti motsi, piri, tatu, china, wozoti Chororororo futi. Kana wakangogara zvako wega pacheya, ita maekisesaizi acho , hapana anomboziva kuti uri kuitei.
Ndiro basa ramabhora awa. Kusimbisa masuro yechitubu kuti chero une murume ane chigusvani, unongonakigwa chete nokuti unohwa wakazara. Unokwanisa kushandisa masuro iyi wakafongora, makumbo akati rimwe uko rimwe uko, musana wakanzi dhefu panotangira chiuno, shure iri mudenga seyembuzvambuzva. Chitubu chiri pabani sechembudzana, murume arimo .
Iwo ane uremu hwakati kuti saka paunosimuka ukada kufambafamba ari mukati anowira pasi. Nyaya iripo manje ndeyokuti ushandise masuro yako kuchengeta mabhora awa mukati mechitubu. Unoramba uchipurakitiza kusvika wagona kuachengetera mukati uchifamba zvako uchishopa uchingomunyungira nemasuro yako kuti mabhora asabuda. Uchiramba uchidaro masuro ichisimba. Kuzoti kwapera mwedzi nehafu unohwa murume oti akapinda, unokwanisa kumubata chibharo aromo zvokuti kana kukoira chaiko anotadza nokuti anenga asungwa. Iwe unozokwanisa kumushinya zvokuti anofunga kuti pane zvaitika.
Kana panokudiridzira paya (unohwa nekuti pakutanga anoruza rythm yaange anayo oita seaoma mutezo) unomirira paanoti mvoooo kuti achitanga kudiridzira, iwe wosunga masuro yako wochitanga kumunyungira uchiti sunge, regedzu, sunge, regedzu, saNURSE ari kupomba muchini we BP. Kana anga ane chii zvacho anosara asisina kana chinhu mukati wamwa urume hwese nechitubu.
Futi kana iwewo usina kupedza, unokwanisa kusunga chombo kuti ropa rinochimisa risabuda machiri, woisa maoko ako pachitubu wozvikwiza chombo chirimo kusvika wapedzawo iwe.
Ukatenga mabhora ako nhasi, ukamashandisa nomazvo, panopera kana vhiki mbiri unenge wato siyana nezvauri nhasi. Kuzoti mwedzi , unenge wangofanana nevhaisi dziya dzataishandisi kuwoodwork kuchikoro. Chiona kuti watanga kudzidzira kushandisa masuru yako yakasimba. Purakitiza nguva imwe neimwe murume anokupa chombo. Unotaimira rythm yemurume seizvi. Anoti achipinda achibuda achipinda achibuda. Pakupinda ipapo pane paanosvika kwekupedzisira oda kuti achinodzoka iwe Kwiiiii ipapo. Unotohwa muviri wake uchiita sokuvhunduka, kuri kunakigwa. Usamubata nguva yakareba, regedza atage kubuda, naponapo unohwa opinda futi achingonosvika kwaari kuenda iwe Kwiii . Zvinoda CONCENTRATION asi ukazvijaira kana iwewo unotohwa kuti pano ndiri kupiwa nomazvo.
Kusimbisa masuro chinhu chakanakira mese.
Posted by Mai E Chibwe at 14:16
tinotenda nefundiso dzenyu amai dei ndakaziva blog yenyu kare ndaive ndakarasikirwa chaizvo tinokutendai nedzidziso dzenyu. Kuno kuZim mabhora ayo anotengwepi?
Mazuvano vanhu vakawanda vanongofamba nyika dzese saka unokwanisa kuva nehama kana shamwari inokwanisa kukutengera kana asingawanikwi muZimbabwe. Zvinoda kutobatisa munhu kwete kumatumira ne Post nokuti nyika yedu ine vanhu vasingambodi kuhwa nezvokugadzirisa muviri, zvikuti panyaya dzepamberi. Ukatarisa pa Internet anowanikwa chose. Imbozama kuSouth Africa kana muZim asimo. Zvoreva kuti unokwanisa kutova wekutanga kumatengesa.
Muri kuita basa mai Chibwe. Ini ndiri kutanga kusunga masuru ndinovimba zvichabatsira nekuti ndine vana vatatu handina chandakashandisa kudzora nhengo yangu uye ndakunzwa kuti kwashama
5 November 2015 at 06:00
Ndinotenda nedzidziso yakapfuma yamurikupa kuhama. Mubvunzo: ndingaudze sei mukadzi wangu kuti asimbise mhasuro nekuti inoita se sensetive issue?. Ndingangoerekane ndauya nema objects aya here? Ndingadii?
5 May 2017 at 06:09